क्यालिफोर्निया सबैको लागी एक जीवन रहित जीवनशैली आग्रह गर्दछ; सौर घरहरू सामेल छन् - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
क्यालिफोर्निया सबैको लागी एक रहित जीवनशैली आग्रह गर्दछ; सौर घरहरू समावेश छन्
सम्पादकको पिक जुलाई 9, 2019 जुलाई 9, 2019 एन्थोनी गिल्बर्ट क्यालिफोर्निया, सम्पादकको पिक, समाचार लेख, प्रविधि
PG&E मस्यौंदा सार्वजनिक सुरक्षा पावर बन्द आगोको प्रतिक्रियामा।
माइक्रो ईन्वर्टेड सौरले बिजुली सकिएपछि रोक्नेछ।
उदीयमान टेक्नोलोजीहरू सतहमा सुरू भईरहेछन्।
क्यालिफोर्नियाको गोल्डेन स्टेटमा अनअर्मेड जमिनभरि सुन्दर पहेलो रंग छ जुन पानी बिना सूर्यको किरणको अत्यधिक मात्राले गर्दा हुन्छ। क्यालिफोर्नियाभरि थुप्रै ठाउँमा days०० दिनको घामको साथ, परिदृश्यहरू सुन्दर सूर्यबाट पिटेको जमिनबाट आगो इन्धनहरूमा परिणत भएका छन्।
विगत केही वर्षहरूमा उत्तरी र दक्षिणी क्यालिफोर्निया समुदायहरूलाई नाश गर्ने दुःखदायी आगोले युटिलिटीहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूको सुरक्षाको लागि पूर्ण संकल्पको रूपमा हेर्ने आदेश दियो, जसले आमूल परिवर्तनलाई उक्साउँदछ।
सौर्य ऊर्जा भनेको सूर्यको प्रकाशबाट बिजुलीमा रूपान्तरण हो, या त सिधा फोटोभोल्टिक्स (PV) को उपयोग गरेर, अप्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रित सौर उर्जा, वा संयोजनको प्रयोग गरेर। एकाग्र सौर उर्जा प्रणालीहरूले धूपको ठूलो क्षेत्रलाई सानो किरणमा फोकस गर्न लेन्स वा ऐना र ट्र्याकिंग प्रणाली प्रयोग गर्दछ। फोटोभोल्टिक कोशिकाले प्रकाशलाई फोटोभोल्टिक प्रभावको उपयोग गरी विद्युतीय प्रवाहमा रूपान्तरण गर्दछ।
यसैबीच, क्यालिफोर्निया परम्परागत रूपमा लगभग यूरोपियन सौर जलवायु को रूप मा मानिन्छ सौर फसल को लागि अद्भुत सूर्य sun०० दिन, लगभग राज्यव्यापी। यो यूटोपियन जलवायुले आधुनिक मानिसहरूलाई सुनको भीड बढाउँदै बलको साथ उद्योगले जनतालाई आशिष्‌ दिएको छ; निर्माता ग्लोबल स्केलेबिलिटीले सौर्य उत्पादन मूल्य घट्यो र २ 300 बर्षे वारंटी कभरेजको साथ। आईआरएस %०% कर reasonableण व्यावहारिक वित्त पोषण विकल्प संग सेवा को कैलिफोर्नियावासीहरु लाई सौर जानको लागि एक ठोस लगानी मा समीकरण बनाएको छ।
हजारौं घरहरू, विद्यालयहरू र व्यवसायहरू उपयोगिता उर्जा आश्रित उपभोक्ता बन्न पुगेका छन् थप सीओपीओसीले राज्यव्यापी उर्जा अभियानको साथ समन्वय गरी सीपीयूसीको राज्यव्यापी शक्ति पहलमा सामेल हुने ग्राहकहरुलाई सशक्त बनाउन उस्को उर्जा बराबरको मान दिइन्छ। चार्ज हुन
सौर्य उद्योग एक सुरक्षित र ऐतिहासिक विश्वसनीय विश्वसनीयता ग्रिड बराबर शक्ति को वरिपरि hinging उत्पादन समाधानको संग Boomed। यस बूम भित्र रहेका सौर्य घरहरू रूपान्तरण गर्ने धेरै उत्पादनहरू मार्केटिंग, खरीद र बिक्रीमा पावर उत्पादन गर्नको लागि ग्रिड सक्रिय हुन आवश्यक पर्दछ। जब ग्रिड सुरक्षा उद्देश्यका लागि तल जान्छ सोलर प्यानलले गर्दछ।
त्यसोभए २०१ 2018 को आगो लाग्यो र चिन्ताको मात्रा हामीले चिनेको भन्दा बढि बढ्यो। प्यासिफिक ग्यास र इलेक्ट्रिकले सार्वजनिक सुरक्षा पावर बन्द योजनाको मस्यौदा तयार गर्‍यो जुन अझ बढी ग्राहकहरूलाई आगजनीको जोखिमबाट जोगाउन खोज्दै छ नजिकको बिजुली बन्द गरेर १,1,500००% अगाडि यसलाई पहिले कहिल्यै कम गरिएको छैन। सुरक्षाको लागि आउटेजका लागि योजना बनाउन यो नयाँ अग्निसुरक्षा संस्कृति अपनाइरहेको छ।
सौर्य घरहरू र तिनीहरूका अधिवक्ताहरूको लागि यो परिवर्तन विशाल छ।
माइक्रो उल्टो सौर घरहरू व्यापक र लोकप्रिय थिए, उत्तम परिस्थितिमा अतुलनीय विश्वसनीयता र निश्चितताको पूर्वानुमान गर्दै। ग्राहकलाई ज्ञान प्रस्तुत गर्दै कि प्रत्येक प्रत्यक्ष सौर प्यानलको प्रत्येक प्यानल ग्रिडलाई पछाडि पछाडि वैकल्पिक वर्तमानमा रूपान्तरण गर्न यसको आफ्नै रूपान्तरण हुनेछ। एउटा क्याच भनेको तिनीहरू ग्रिड बिना काम गर्दैनन्।
उभरते A / C युग्मन सौर टेक्नोलोजीहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्!
त्यसो भए, ती घरहरूका लागि के गर्न सकिन्छ जुन ती प्यानलहरूलाई काममा फसल बनाउन र फसल काट्न पूर्ण रूपमा ग्रिड निर्भर र सुरक्षित बिना ग्रिडलाई पोषण दिएर गर्न सकिन्छ? त्यहाँ समाधानहरू छन् र बिस्तारै संख्यामा बढ्दै छन्।
सोलर माइक्रो-इन्भर्टर, वा केवल माइक्रोइन्भर्टर, फोटोभोल्टाइकमा प्रयोग हुने प्लग-एन्ड-प्ले उपकरण हो, जुन एकल सौर मोड्युलले उत्पन्न प्रत्यक्ष सीसी (डीसी) लाई वैकल्पिक वर्तमान (एसी) मा रूपान्तरण गर्दछ। माइक्रोइन्भेर्टरहरू पारम्परिक स्ट्रि and र केन्द्रीय सौर इन्भर्टरहरूसँग भिन्न छन्, जसमा एकल इन्भर्टर बहु ​​सौर प्यानलमा जडित छ। धेरै माइक्रोइन्वेटरहरूबाट आउटपुट मिलाउन सकिन्छ र अक्सर बिजुली ग्रिडमा खुवाउन सकिन्छ।
वर्षौंदेखि माइक्रो उल्ट्याइएको सौर्य सञ्चालित ग्राहकले उचित ब्याक अप विकल्पहरू स्वीकार गरे। ती ग्राहकहरुलाई लोड शेवि battery ब्याट्री विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो जुन अझै ग्रिड बिना ब्याट्री ब्याक अपको लागि अनुमति दिँदैन, छोटो ब्याट्री निर्भर चक्रको साथ चरम घण्टाको अवधिमा केवल दाढी गर्नुहोस्।
उनिहरुका जेनेरेटर प्रतिस्पर्धाले हिर्काए उस्तै सोलर उत्पादकहरूले विद्युत आउटसेजको लागि सामान्य समाधान प्रदान गर्दछ जुन प्राकृतिक ग्यास वा प्रोपेनले खान्छ। यो समाधानले समस्या समाधान गर्दछ, तैपनि यसले अझै सौर्य उत्पादनलाई मेशिन लोडलाई हल्का गर्न मद्दत गर्दैन।
यो कि तपाई कि त बैक अप क्षमता छनौट गर्न र माइक्रो इनभर्टर शक्ति बेवास्ता गर्न को लागी, वा ग्रिड निर्भरता छनौट गर्नुहोस् र ब्याट्री ब्याक अप को बारे मा चिन्ता नगर्नुहोस् समाधान समाधान प्रस्तुत नगरेसम्म।
अमेरिकीहरू सबैले स्वतन्त्रताको मूल्यलाई मान्यता दिएका छन् र क्यालिफोर्नियाको माइक्रो इन्भर्टेड सौर ग्राहकहरूले वास्तवमै ग्रिड परस्पर निर्भरतासँग बिजुली स्वायत्तता प्राप्त गर्न सक्दछन्, घरको उर्जा आवश्यकताको सहयोगमा ग्रिडसँग वा बिना नै काम गरिरहेका हुन्छन् - आगो बाँकी रहेका सबै सुरक्षित छन्। । सौर टेक्नोलोजीमा यी प्रगतिहरूको अधिक विवरणहरूको लागि तपाईंको स्थानीय स्थापनाकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कुनै पनि हिसाबले सौर्य ग्राहकहरूको लागि ब्याट्री ब्याकअप पावर विकल्पहरू फायर प्रुफ समाधान थपिँदै छैन। यसले आवश्यक भएको बेला खाली गर्ने आवश्यकतालाई हटाउँदैन। यी नयाँ अवधारणाहरूले मात्र विद्युतीय सुरक्षा बन्द हुने प्रतिक्षा गर्नेहरूलाई मात्र शक्ति प्रदान गर्दछ जसले विद्यमान सौर्य उत्पादन ए / सी युनिट माइक्रो इन्भर्टेड सिस्टमहरू गर्दछ।
हो, यी समाधान लागत लाग्छ। तर के गर्दैन? पावर लागत माथी जाँदैछन् र नगरपालिका उपयोगिताहरु भन्दा बाहिर निरपेक्ष मूल्यमा सेट गरिएको छैन। तिनीहरू सस्तो छैनन् तर न त पूरै फ्रीजर र फ्रिजलाई खानाले भर्नु पर्छ वा अझ राम्रो ठाउँमा बस्नुपर्दछ आरामदायी जीवनको कारण अग्नि सुरक्षाको मील टाढा र अन-खाली निकास भएका उपभोक्ताहरूको कारण। के तपाईंको उर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार विस्तार निर्भरता, वा स्वतन्त्रता को लायक छ?
क्यालिफोर्निया सांप्रदायिक समाचार माइक्रो इन्भर्टर माइक्रो इन्भर्टरहरू PG&E फायर सुरक्षा सौर
एक सौर अधिवक्ता साथै एक सार्वजनिक उद्देश्य कोष अधिवक्ता। एन्थोनी राज्यस्तरीय पहलहरूको लोबीको रूपमा काम गर्दछन् जसले स्वतन्त्र स्थानीयकृत ठेकेदारहरूमा नाटकीय प्रभाव पार्दछ। ललित कला, राम्रो खाना, आत्मा, खेल, यात्रा र परिवार को एक प्रेमी।
के महिलाहरु लाईनको अगाडि उफ्रदै छन्? Dem प्रजातान्त्रिक नेताहरूको एक साधारण दृश्य
डिमांड ड्राइभिंग विध्वंस उपकरण बजार